Yusuf Garaad:Saxaafadda iyo Danta Qaranka | Somaale.com
Yusuf Garaad:Saxaafadda iyo Danta Qaranka
Saxaafadda waxaan u soo jeediyay in ay ilaaliso xeerarka saxaafadda. In ay mar kastaba ahaato mid ay wararkeeda oo dhami ay sugan yihiin. In ay ahaato mid dhexdhexaad ah oo dhinacyada oo dhan si isu dheelli tiran u gudbisa afkaartooda.
In ay xafiddo warka oo ah ammaano uu war-curiyuhu u dhiibay ama aad adigu ogaatay. Dhegeysiga, daawashada iyo akhriskuna ay yihiin iyo kalsooni uu shacabku ku siyay oo ay tahay in aad dhowrto.
Waxaan xusay in ay tahay in saxaafaddu ay si madaxbannaan u shaqeyso iyada oo u hoggaansan shuruucda dalka.
In ay saxaafaddu kor u qaaddo aqoonta iyo tababbarrada ilaa heer dururgsan oo u saamaxa in ay xaalad murugsan ay wakhti aad u yar gudihiis ay si kalsooni leh uga qaadan karto go’aan adag.
Xagga maamulka iyo milkaalayaasha Saxaafadda waxaan baaqay in ay hey’ad kasta oo wareed ay is bixiso. Oo bixiso mushaar ku filan shaqaalaheeda, haddii aanay awoodinna ay dib uga fiirsato xaaladda.
Waxay ka fekeri kartaa in ay idaacad kale isku biiraan si dakhligu kor ugu kaco, kharashkuna uu u yaraado. Waxay raadin kartaa in si sharciga waafaqsan ay ku kordhiso dakhligeeda. Intaasi haddii ay suurta geli waayaan, tab kalena aanay hayn, waxaa la gudboon in ay idaacadda u laabto albaabbada.
Weriye aan mushaar qaadan oo mikrofoon la aada magaaladu wax badan kama khatar yara askari aan mushaar qaadan oo qori la siiyay oo magaalada lagu sii dhex daayay.
Iyada oo intaas oo dhan dhowreysa waxaan Saxaafadda u soo jeediyay in ay haddana hesho tab ay ku horumarin karto danta guud ee muddada gaaban, tan muddada dhexe iyo midda xilliga fogba.
In aanay danta Guud u arag wax Dowladda oo keliyihi ay u xilsaaran tahay. In saxaafaddu ay Dowladda ku daba gasho in ay hubiso in ay ka shaqeyneyso danta guud waliba sida ugu habboon. Danta guud waxaa ka mid ah ballanqaadyada iyo arrimaha aan la sii ogeyn ee dalka soo food saara.
In ay saxaafaddu kala garato in danta Qaranka iyo danta Xukuumadda ama Xisbiga talada dalka hayaa ay kala yihiin laba is waafaqi karta ama iska hor imaan karta. Saxaafaddana ay mas’uuliyaddeedu tahay in ay baarto dadweynahana ku wargeliso marka xukuumad ay dayacdo ama ulakac uga baaqsato danta Qaranka.
Marka ay xukuumaddu ku joogto Danta Qaranka waa in ay saxaafaddu gacan ku siiso iyada oo aan noqon af hayeen Dowladeed loona adeegsan borobagaando.
Saxaafaddu in ay lahaato ajende u adeegaya danta Qaranka. Taas oo macnaheedu yahay in aanay isku soo koobin ka warbixinta dhacdooyinka. Waxaan soo jeediyay in ay abuurto doodo, falanqeyn iyo wareysiyo qoto dheer oo dadka diyaarinaya iyo kuwa qaadayaaba ay ku saleynayaan baaris iyo xaqiiqooyin si aqoon ku dhisan loo ratibay.
Waxaan muujiyay farqiga u dhexeeya faallo oo ah ra’yi iyo falanqeyn oo ah qiimeyn ku saleysan xaqiiqooyinka jira.
Saxaafaddu waa ay sheegi kartaa wax aan danta Qaranka u adeegeyn. Laakiin waxaa khasab ah in ay ahaadaan kuwo aan ka hor imaaneyn danta Qaranka.
Saxaafadda waxaan ku bogaadiyay horumarka marba heer joogay ee ay sameysay tan iyo burburkii Dowladdii Kacaanka.
Dowladda dhankeeda waxaan u soo jeediyay in ay dhowrto Madaxbannaanida saxaafadda iyo in aanay cadaw ka dhigan.
Siyaasiga iyo saxaafaddu ma ahan in ay saaxiib noqdaan isu jiibiya oo la kala garan waayo codka siyaasiga iyo sowtka suxufiga.
Taa cagisgeed, ma ahan in ay cadow isku noqdaan oo ay isku aakhiro seegaan.
Suxufiga iyo siyaasigu kaalin loo baahan yahay ayay bulshada ugu jiraan, midba kaalintiisa ayaa ka duwan kaalinta kan kale. Laakiin waa isu baahan yihiin. Waa laf haye iyo laba dhaga haye.
Sidoo kale xiriirka mucaaradka iyo ka dhexeeya saxaafaddu waa in aanuu col ahaan, noqonna saaxiibbo isku milma. Waa in uu la mid yahay xiriirka ka dhexeeya Dowladda iyo Saxaafadda.
Dowladda waxaan u soo jeedinay in ay ila habboon tahay in Idaacadda Qaranku ay ahaato mid Dowladda, mucaaradka iyo shacabka u dhex ah. Xaqiiqada ka warranta, xaqiiqada oo dhan. In haddii ay isku daydo in ay war jira qariso, ay iyadu markaas ku casuumeyso in dhegeystayaasheedu ay war ka doontaan idaacado kale, waliba ayada oo warka loo sheegayo si aanay iyadu saameyn ku lahayn.
Waxaan u mahadcelinayaa Machadka RAAS oo munaasabadda qabanqaabiyay. Madaxa Machadka, Maxamed Qaasim, iyo kooxda ay wadashaqeeyaan ee aqoonta iyo akhlaaqda badan aad ayaan ugu mahadcelinayaa.
Waxaan u mahadcelinayaa dhallinyarada faraha badan oo munaasabadda ka soo qeyb galay, sida sharafta leh ii dhegeystay ka dibna su’aalo iyo afkaar ila wadaagay.
Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaya Macallimuu, Catoosh, Yusuf Xasan iyo Cabdirisaaq Socoto oo dhammaantood gacan iga siiyay soo jeedin iyo dood aan shalay la yeeshay suxufiyiin iyo dhallinyaro kale.
Macallimuu wuxuu gacan ka geystay qabanqaabada, Catoosh boggiisa taageerayaasha badan ayuu ku lifaaqay oo toos looga daawaday, Yusuf Xasan tusaaleyaal ayuu bixiyay qiimo badan, Socoto wuxuu qaabbilsanaa hadal qeybinta iyo gaasinka madasha.
Waxaan si aad u diirran ugu mahadcelinayaa Saaxiibbadeyda Saxaafadda Bulshada ee talooyinka iyo afkaarta qiimaha badan igula wadaagay markii aan diyaarinayay mowduucan.
Diyaarado dagaal oo duqeeyay deegaano ka tirsan Gedo
Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Uganda Yoweri Museveni oo kulmay